प्रदेश न तिन – ई-सरोकार न्याय र समताको संवाहक
Category: प्रदेश न तिन
काठमाडौं, २५ भदौ २०७७: गत साउन ३० गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित लिदी गाउँमा गएको पहिरो पीडितलाई हाल सम्मकै धेरै सहयोग पाउने भएको छ । विदेश स्थित तामाङ संघ÷संस्थाका प्रतिनिधिहरुले आज नेपाल तामाङ घेदुङको सङ्घीय सभाहल चुच्चेपाटी, बौद्धमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विदेशमा संकलित एकमुष्ट रकम रु. २२,१२,४९५/– पीडित परिवार समक्ष पु¥याई वितरण गर्न नेपाल तामाङ घेदुङ विपद ब्यवस्थापन प्रमूख रामकृष्ण ब्लोन तामाङलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । यो रकम अन्य संस्थाले वितरण गरेकोमध्ये आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । सहयोग रकम उपलब्ध गराउनेहरुमा तामाङ समाज बेल्जियम रु….
September 8, 2020 September 8, 2020 सरोकार संवाददाता
काठमान्डौ, २३ भद्र २०७७: नेपाल तामाङ बिद्यार्थी घेदुङ संघिय कार्यसमितिले नेपाल नेशनल हस्पिटलको आसियुमा उपचारत बालकलाइ आर्थिक सहयोग गरेको छ । काभ्रे महाभारत गाउपालिका वाड न ३ बस्ने ज्ञान बहादुर तामाङ्गका १२ वर्षीय छोरा कान्छालाल तामाङ्गलाइ रु:-१२,५०० (बाह्रा हजार पाच सय रुपियां) अस्पताल मै उपस्थित भएर सहयोग गरेको विद्यार्थी घेदुङ्गका संघिय अध्यक्ष दिनेश तामाङ्ग ले जानकारी दिनु भयो । “आर्थिक अभावको कारण अप्रेसन गर्न नसकेको खबर थाहा पाएपछि हामीले समिति र सल्लाकारहरुसग उठाएर सहयोग गरेका हौ” अध्यक्ष तामाङ्गले बताउनु भयो । सहयोगी मनहरुले सहयोग गर्न बुवा ज्ञानबहादुर योञ्जन र दाई…
काठमाडौं । हरेक युवाको चाहाना हुन्छ गाउँ छोडेर शहर पस्ने अनि धेरै पैसा कमाउने । शहरमा पनि भनेको जस्तो पैसा कमाउन नसके पछि विदेशतिर जाने । तर केही युवाहरुभने गाउँछोडेर शहर पस्ने अनि आफ्नै केही ब्यापार ब्यवसायी गर्ने । हो हामी यहाँ म यस्तै गाउँ छोडेर शहर पसेका केही युवाहरुको विषयमा चर्चा गर्न गईरहेको छु । करिब १० बर्ष अघि गाउँछोडेर आएका केही युवाहरुले अहिले करिब ४१ रोपनी जग्गामा आफ्नै कृषि र्फम संचालन गरिरहेका छन । जसबाट उनीहरुले १५-२० जनालाई रोजगारी समेत दिन सफल भएका छन । ४५ लाख लगानी…
प्रदेश न तिन, समाचारagricalture
काठमाडौं , १३ जेस्ठ २०७७: कोभिड-१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाल पनि त्यसमा अछुतो छैन त्यसैले लगभग दुइ महिनादेखि नेपाल पनि लक्डाउन कायम छ । ज्याला मजदुरी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने निम्न आय भएका जनता अहिलेको माहामारीमा सबैभन्दा पिडित भएका छन । हाललाई मनको धनी, समाजसेवी, जनताको सेवा नै गर्छु भन्ने नेताको सहयोगको याचन गर्नु बाहेक तिनीहरुसग केहि कुनै विकल्प छैन । थाहा छैन तिनको याचना कतिले सुने या सुनेनन सरकारले करोड करोड बाढदा ति गरिबीको भान्छामा पुग्यो या पुगेन त्यो त सम्बन्धित निकायलाइ पक्कै…